प्रधानसेनापति शर्मा दिल्ली प्रस्थान - Dainik Online Dainik Online
प्रधानसेनापति शर्मा दिल्ली प्रस्थान
प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलबार १० : ४९
काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको औपचारिक निमन्त्रणामा मंगलबार प्रधानसेनापति शर्मा नौ सदस्यीय भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्दै दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् ।
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको मानार्थ दर्ज्यानी ग्रहण गर्न उनी दिल्ली भ्रमणमा गएका हुन् । नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई कदरस्वरुप एकअर्को मुलुकको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मान गर्ने प्रचलन छ ।
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार हुने विशेष समारोहमा प्रधानसेनापति शर्मालाई भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्हबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भ्रमण सकेर प्रधानसेनापति शर्मा शुक्रवार स्वदेश फर्कनेछन् । २० कात्तिक २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी प्रदान गरेकी थिइन् ।
देशभर चुनावी माहौल बन्दै छ : अध्यक्ष दाहाल
बुटवल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा चुनावी माहौल तयार भइरहेको बताएका छन्। रुपन्देहीका
अहंकारी र घमन्डी मान्छे नेता हुँदैन : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घमन्डी र अहंकारी नेता नहुने बताएका छन्। एमालेको १०औं
नवनिर्वाचित एमाले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै
काठमाडौं । नवनिर्वाचित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै छ। १०औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित एमाले
एमालेमा धेरै निर्विरोध निर्वाचित (सूचिसहित)
नेकपा (एमाले) को १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अधिकांश पदमा निर्विरोध भएको छ। महाधिवेशनमा १७५ पदाधिकारी
लागू औषधसहित १३ वर्षीय बालक पक्राउ
महोत्तरी । महोत्तरीको सम्सीबाट लागूऔषधसहित १३ वर्षीय बालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुली कमलामाई
अध्यक्षमा हारेका भीम रावलले केन्द्रीय सदस्यको खाएनन् शपथ
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका भीम रावलले शपथ ग्रहण गरेनन्। एमाले विधान अनुसार केन्द्रीय
भीम रावल र घनश्याम भुसाल केन्द्रीय सदस्यमा विजयी, रावलद्वारा अस्वीकार
एमालेको पदाधिकारीमा पराजित नेताहरू भीम रावल र घनश्याम भुसाल केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका छन्। मतपरिणाम
एमाले महाधिवेशन: १७ बुँदे घोषणापत्र जारी
चितवन । चितवनको सौराहामा जारी एमालेको १०औं महाधिवेशन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको
३ घण्टा अगाडि
‘लारबा सान्दारालाबा’ भन्दै भाइरल बनेका क्रिश्चियन पादरीलाई २ बर्षको जेल
५ घण्टा अगाडि
भारतले भन्योः हाम्रो देशमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट भित्रिएको छैन
अछाममा बस दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु
६ घण्टा अगाडि
बन्दिपुरलाई मासु र दूधमा ‘हब’ बनाइँदै
७ घण्टा अगाडि
जापान र अस्ट्रेलिया पुग्यो ओमिक्रोन भेरियन्ट, ७० देशले लगाइसके दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिबन्ध
८ घण्टा अगाडि
एमाले अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित, हारे भीम रावल
अष्ट्रेलियामा ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटियो
२ दिन अगाडि
यी देशमा फैलियो कोभिडको खतरनाक नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले भनेः म रचना रिमाललाई वान साइड लभ गर्छु
‘रुस र चीनले अमेरिका तह लगाउन सम्झौता गरे’
४ दिन अगाडि
बेलायतले नेपालबाट १० हजार नर्स लैजाने, पहिलो चरणमा २ सय जाने, वार्षिक तलब ७६ लाख
५ दिन अगाडि
दैनिक अनलाइन प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित
सूचना विभागमा दर्ता नं. : 2399/077-078
Kathmandu -29 ,Nepal
+977 01-4480334 / 9851130576
विज्ञापनका लागि सम्पर्क
दैनिक अनलाइन टीम
प्रकाशक/ सम्पादक : पवन रेग्मी
Powered by Appharu